Fiaraha-miasa ho an’ny Fampandrosoana maharitra 2021-2023 : Nandray anjara ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana
Tontosa androany Alakamisy 11 Novambra 2021 tetsy amin’ny Carlton Anosy ny fanombohana ny Drafitrasa fiaraha-miasa ho an’ny Fampandrosoana maharitra 2021-2023, eo amin’ny Firenena Mikambana sy Madagasikara. Himasoan’ny 2 tonta miaraka ny fanatrarana ny Tanjon’ny Fampandrosoana maharitra (ODD).
Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny fotoana, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza. Nanararaotra nametraka fanontaniana isan-karazany taminy ireo mpanao gazety.
Tahaka izao ny fanazavana nentin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza.
Fanafainganana ny asam-pitsarana: Himasoana ny hai-kajy mirindra
Milofo fatratra amin’ny fanatsarana ny raharaham-pitsarana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, tarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza. Anisany ny fanafainganana ny asam-pitsarana. Fitaovana ilaina sy manampy indrindra ny fampiasana ny hai-kajy mirindra.
Nisokatra androany Alakamisy 11 Novambra 2021 eto amin’ny « Hôtel Splendide », Ambalamanasy Toamasina, ny andiany faha-10 amin’ny 2 andro ho an’ny Lehiben’ny Fitsarana (Journées des Chefs de Juridiction – na JCJ). Toy ny tany Toliara sy Mahajanga, dia lohahevitra amin’ny atrikasa fiofanana ny hoe: « Fitantanana ny Fitsarana amin’izao vanim-potoanan’ny nomerika na hai-kajy mirindra »
Mandray anjara ireo Lehiben’ny Fitsarana eto amin’ny Faritra Atsinanana sy ny avy ao an-drenivohitra manontolo. Mpanohana ny NFD (Ny Fanjakana ho an’ny Daholobe).
Toy izao ny lahateny fanokafana nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa RABY SAVATSARAH Ain’Harimanga Gabrielle, izay nisolo tena ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.